हालसम्म युट्युबमा ३ करोड भन्दा धेरै हेरिएका नेपाली १० गीतहरु • Gazzabko Online
हालसम्म युट्युबमा ३ करोड भन्दा धेरै हेरिएका नेपाली १० गीतहरु
gazzabkoonline.com || January 11, 2019 at 4:55 pm
पछिल्लो समय युट्युब गीत संगीतको लोकप्रियता नाप्ने माध्यम बनेको छ । युट्युबमा जति धेरै म्युज भयो त्यति नै गीतलाई राम्रो र चर्चित भएको मानिन्छ । कुनै समय थियो जतिबेला क्यासेट, सिडिमा गीत सुनिन्थ्यो, हेरिन्थ्यो र जति धेरै क्यासेट, सिडि बिक्रि भयो उतै नै उक्त गीतको लोकप्रिय मानिन्थ्यो । तर आज समय फेरिएको छ । डिजिटलाइजेशनसँगै म्युजिक भिडियो र गीतहरु युट्युबमा अपलोड गरिन्छ । युट्युबको भ्युज अनुशार नै कुन गीत कति लोकप्रिय छ भन्ने कुराको मापन गरिन्छ । हामीले यहाँ युट्युबमा ३ करोड भन्दा बढि पटक हेरिएका चर्चित १० गीतहरु समोवेश गरेका छौँ । जसमा चलचित्र ६ ओटा र आधुनिक गीतहरु ४ ओटा रहेका छन् । यी १० गीत बाहेक हालसम्म कुनै पनि गीतहरु ३ करोड भन्दा धेरै हेरिएको छैन् । हेरौँ, ३ करोड भ्युज बटुल्ने १० नेपाली गीतहरु ।
१.कुटुमा कुटुः पहिलो नंम्बरमा छ चलचित्र “दुई रुपैयाँ” को कुटुमा कुटु । राजन राज शिवकोटी र मेलिना राईको आवाज रहेको गीतले फिल्मलाई सफलता दिलाउन पनि सहयोग गर्यो । स्वस्तिमा खड्का, आशिफ साह, निश्चल बस्नेत, बुद्धि तामाङले गीतमा अभिनय गरेका छन् । गीतलाई राजन राज शिवाकोटीले नै संगीत गरेका छन् ।
२.माया लुकि लुकिः दोस्रो नंम्बरमा छ गायिका टिका प्रसाईँको गीत “माया लुकि लुकि” । “कार्टुन्ज क्रु” ले फिचरिङ गरेको गीतलाई आनन्द अधिकारीले लेखेका छन् भने आशिष अविरलले संगीत गरेका छन् ।
३. नाँच फिरिरिः महेश काफ्ले मेलिना राईको आवाजमा रहेको गीत “नाँच फिरिरि” ३ करोड भन्दा बढि हेरिने गीतको तेस्रो नंम्बरमा छ । महेश काफ्लेकै शब्द र संगीत रहेको गीतको म्युजिक भिडियोमा निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खड्काले अभिनय गरेका छन् ।
४.पुर्व पश्चिम रेलः चलचित्र “छक्का पञ्जा” को “पुर्व पश्चिम रेल” पनि सर्वाधिक हेरिने गीतको चौँथो नंम्बरमा छ । राजनराज शिवाकोटीको शब्द संगीतमा बनेको गीतमा जितु नेपाल, केदार घिमिरे, प्रियंका कार्की, नम्रता सापकोटा, बुद्धि तामाङ, दीपकराज गिरि, वर्षा रावत लगायतको अभिनय छ ।
५. नाई मलाई थाहा छैन्ः “कार्टुन्ज क्रु” र चर्चित मोडल एलिशा राईले फिचरिङ गरेको यो गीत सुचीको पाँचौ नम्बरमा छ । संजिब पराजुलि र टिका प्रसाईँको आवाज रहेको गीतलाई एक नारायण भण्डारीले लेखेका छन् भने आशिष अविरलको संगीत छ ।
६. पर्ख पर्ख मायालुः चलचित्र “मंगलम” को पर्ख पर्ख मायालु पनि युट्युबमा हिट छ । यो गीतले पनि सबैभन्दा पहिले ३ करोड क्लबमा पुग्ने सुचीमा नाम लेखाउन सफल भएको छ । शिल्पा पाख्रेल र पुष्प खड्काले गीतमा अभिनय गरेका छन् । कृष्ण काफ्ले र विन्दु परियारको आवाज रहेको गीतमा दिपक शर्माको शब्द, संगीत छ ।
७. माछिले खानेः मेलिना राई र सरोज ओलीको आवाज रहेको “माछिले खाने खोली लेऊ” सर्वप्रथम ३ करोड भ्युज पुग्ने गीतको सातौँ नंम्बरमा छ । “कार्टुन्ज क्रु” र नायिका प्रियंका कार्कीले फिचरिङ गरेको गीतको शब्द दिनेश थपलियाले लेखेका छन् ।
८.सुर्कै थैलीः कुनै समयमा सबै रेकर्ड तोड्न सफल गीत हो “सुर्के थैली खै” । चलचित्र “वडा नंम्बर छ” को यो गीत पनि ३ करोड भ्युज कमाउन सफल भएको छ । राजन राज शिवाकोटी, अञ्जु पन्त र राजु विश्वकर्माको आवाज रहेको गीतमा राजनराजकै शब्द र संगीत छ । गीतकोा भिडियोमा दिपाश्री निरौला, सिताराम कट्टेल, दयाहाङ राई, रञ्जिता गुरुङ, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, प्रियंका कार्की र दिपकराज गिरिको अभिनय छ ।
९.गोजीमा दाम छैन्ः “गोजीमा दाम छैन्” बोलको गीत चलचित्र “चङ्गा चेट” मा समावेश गरिएको छ । राजन राज शिवकोटी, मेलिना राई र ग्रिष्मा शिवाकोटीको स्वर रहेको गीतलाई हरिहर तिमल्सिनाले लेखेका छन् । गीतमा संगीत राजन राज शिवाकोटीकै छ । गीतको भिडियोमा प्रियंका कार्की, आयुष्मान देशराज, संदिप श्रेत्री, प्रमिता राज्यलक्ष्मी राणा, रविन्द्र झाको अभिनय रहेको छ ।
१०. पहिलो नंम्बरमाः चलचित्र “छक्का पञ्जा ३” को गीत “पहिलो नंम्बरमा” सुचीको १० औँ नंम्बरमा छ । दिपक दिपा, दिपिका प्रसाईँ, प्रियंका कार्की, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, स्वस्तिमा खड्का, वर्षा शिवाकोटी, बुद्धि तामाङ लगायतले गीतमा देखिएका छन् । डेविट शंकर र विन्दु परियारको आवाज रहेको गीतको शब्द राजेन्द्र थापाले लेखेका छन् भने संगीत दिपक शर्माको छ ।
एलिना र हर्कुलसको स्वरमा आयो ‘छोएर मलाई’
कुरा ‘भद्रगोल’कोः मेकअप पछि कस्ता मान्छे कस्ता देखिन्छन् (भिडियो)
नेपाली टीमको पराजयपछि निशाको यस्तो स्टाटस
‘भद्रगोल’मा देखिदैँ प्रदीप र जसिता